Nagu saabsan - Yiwu Leto Hardware Co., Ltd.
Ku saabsan YWLETO
Diiwaangashan 2016, "Leto" waa sumad Yiwu Leto Hardware Co., Ltd., oo u hoggaansan ujeeddadii asalka ahayd ee abuuritaanka qaab nololeed xarrago leh. Baaxadda alaabtayadu waxay dabooshaa meel musqusha, meel jikada, meel balakoon, qalab, iwm. Isla mar ahaantaana, baaxadda ganacsiga waxaa lagu ballaariyay habaynta iyo garashada beerta dabaqadda dhexe ilaa heer sare ah, oo leh bartilmaameedyo iib oo ballaadhan guriga oo dhan iyo dibadda.
Loo dhoofiyay 106 dal
Waxaa hagaya baahida macaamiisha, Leto waxay leedahay nidaam adeeg iib oo dhammaystiran iyo is -weydaarsi firfircoon oo leh qaabka “Dukaan -iibiyaha Cusub”, kaas oo si weyn waxtar u leh si kor loogu qaado waayo -aragnimada wax -iibsiga. Leto ayaa si firfircoon looga baadhay suuqa adduunka oo dhan, iyadoo alaabada loo dhoofiyay 106 waddan sida Yurub, Ameerika, Bariga Dhexe, Koonfur -bari Aasiya iyo Koonfurta Ameerika. Aragtida runta ah, waxaa jira hool bandhig ganacsi oo loogu talagalay macaamil-ka-fool-ka-fool ah oo lala yeesho iibsadayaasha adduunka oo idil. Intaa waxaa sii dheer, Alibaba.com, 1688.com, Yiwugo.com, Facebook iyo sidoo kale kanaallo ganacsi oo kala duwan oo khadka tooska ah iyo kan tooska ah ayaa bixiya duruufo ganacsi oo sahlan. Waxaan bixinnaa suuq-geyn kanaal badan, annagoo gaarsiineyna badeecooyin tayo sare leh oo u dhow guryaha macaamiisha, waxaanan ka caawineynaa macaamil kasta inuu abuuro nolol wanaagsan oo leh musqulo iyo kushiin tayo sare leh.
Si loo daboolo baahida macaamiisha ee tayada sare leh, shirkadeenu waxay ku sii jiri doontaa hal-abuurnimada farsamada iyo soosaarka alaabada oo tayo sare leh. Waxaan had iyo jeer u hoggaansami doonnaa niyaddayada ganacsi ee "Midnimo, Hawlkarnimo, Sahamin iyo Hal-abuur waxaanna siin doonaa macaamiisha adduunka oo dhan alaab tayo sare leh.
Mustaqbalka, ku tiirsanaanta kooxaha xirfadda leh iyo suuqgeynta shabakadda awoodda leh, Leto waxay sii wadi doontaa inay ka go'an tahay inay siiso macaamiisha adeegyo aad u wanaagsan iyo alaab qiimo-macquul ah oo tayo leh, si loo hagaajiyo tayada nolosha macaamiisha. Dhanka kale, Leto wuxuu si joogto ah u hagaajiyaa xoogga shirkadda, wuxuu horumariyaa oo soo saaraa istiraatiijiyad, wuxuu u abuuraa qiime macaamiisha, shaqaalaha, saamileyda, bulshada iyo la -hawlgalayaasha kale.
YIWU LETO HARDWARE CO., LTDoo ku yaal magaalada ganacsiga caalamiga ah ee YIWU, CHINA, oo la diiwaangaliyay 2016, “Leto” waa astaan. Annagoo ah shirkad ganacsi oo shisheeye oo xirfad leh, waxaa nalagu ogaaday tayada iyo sameynta xiriir ganacsi oo joogto ah, waxaanna leenahay 13 sano oo waayo -aragnimo ah warshadan. U hoggaansanaanta ujeeddadii asalka ahayd ee ahayd abuuritaanka qaab nololeed xarrago leh. Alaabtayada, waxay baaxadoodu dabooshaa meel musqusha, meel jikada, meel balakoon, qalab, iwm. Isla mar ahaantaana, baaxadda meheraddu waxay ku fidsan tahay habaynta iyo garaadka beerta dabaqadda dhexe ilaa heer sare ah, oo leh bartilmaameedyo iib oo ballaadhan guriga iyo dibaddaba.